Wowow Toilet Pepa Rinobata Neserfoni Shelf
musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / Wowow Chimbuzi Pepa Mubati Neserura Nhare pasherufu
Stainless simbi chimbuzi bepa chinobata chazvino & chakashongedzwa dhizaini: Brushed nickel yapera, inowirirana ingangoita yekushongedza dhizaini, inopa iyo yakanaka nzira kune Anti-zvigunwe zvemazuvano dhizaini.
Inowedzera runako rukuru uye inoderedza kuchenesa kwakashata. Induction dhizaini pane yepamusoro shefu inobatsira kuti zvinhu zvirege kutsvedza kubva.
inokwenenzverwa chimbuzi musuki akabata 4010301 zvinhu:
1. Yakagadzirwa kubva pakakora 304 simbi isina chinhu ine girazi polishing maitiro, iri kupenya uye kupenya Chenesa iyo glue nzvimbo. Iyo substrate inofanirwa kunge yakaoma, isina guruva, wakisi uye mafuta. Maka nzvimbo yaunoda kuchinhu chako pane yekubatanidza pamusoro usati waiswa. Zora iyo glue kumashure kweChinhu. Bvisa pikicha inodzivirira yechinhu ichi kubva kuchinhu. Namira chinhu icho pane yekunamatira uye wobva wadzvanya pasi icho kusvika approx. 3-5 maminetsi. Namatira iyo yechipiri glue pane icho chinhu. Usafambisa chinhu mushure mekuisirwa. Usati washandisa, mirira kanenge maawa makumi mana nemasere (pane nguva 48-3 nguva) kuti glue riome zvakakwana.
1. Izvo hazvina kukodzera kumadziro akavezwa, madziro echalky, kumashure kana zvimwe zvakapfava zviso.
2. Kana usina chokwadi kana chigadzirwa chedu chichigamuchirwa pachiso chako, kana kana iwe uine mimwe mibvunzo, ndapota nyorera vatengi vedu masevhisi.
3. Iyo yekunamatira inogona kukwaturwa nyore nebanga kana raoma. Ndokumbirawo mumirire izvi kusvikira mapunzwa pamberi pekunamira chisati chaoma sezvo ichifashukira.
4. Iyo yekuomesa nguva yakareba nepo kunyorova kuri mukamuri kuri kukuru. Ndokumbira umirire kwemaawa makumi mana nemashanu kana anopfuura usati washandiswa.
5. Mativi maviri anogona kuiswa pachena
- Saizi: 18cm * 19cm * 12cm
- Kurema: 680g
- kuremerwa kugona: 9kg
- Chinyorwa: Stainless Simbi
- Pamusoro: brushed nickel
- Kuisa nzira: yekuzvivhara-yega, kumisikidza kumadziro
Toilet pepa inobata nesherufu
Dowels uye zvakavanzika zvekuiswa kwemadziro
SKU: 4010301 Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories Tags: Bronze Nickel, Simbi isina ngura
0.68 kg = 1.4991 lb = 23.9863 oz
WOWOW Stainless Simbi faucet Yakabata Yakabhururuka Nic ...
WOWOW Pop Up Bathroom Sink Drain Nekufashukira
Hex Kiyi Allen Wrench
WOWOW Yakabhurwa Nickel Kubata kwePot Filler Faucet